Spanish/Español | English | Chinese (Simplified)/简化字
Guudmarka Dekedyarada (Pier)
Waxaan dib u nakh-shadeynaynaa Dekedyarada (Pier) 58
Ku soo dhawoow guriga furan ee internet-ka ee mashruuca nakh-shadda Dekedyarada (Pier) 58. Waxaan dib u nakh-shadeynaynaa Dekedyarada (Pier) 58 si aan u abuurno darjiin/beer dadweyne oo aan u sii wanaajiyo gaarista, bedqabka iyo debecsanaanta dekedyarada (pier), iyada oo la bixinayo aragtida/muuqaalka ballaaran ee Gacan-biyoodka Elliott Bay iyo Buuraha Olombik (Olympic Mountains). Beerta dekedyarada (pier) ee cusub ayaa la nakh-shadeeyay iyada oo gaar ahaan maskaxda lagu hayo qoysaska iyo carruurta yaryar, goob-ciyaareed, goobo lagu nasto iyo fagaare dadweyne oo ay barnaamijkooda dejin doonnaan Saaxiibada Biyo-xigeenka (Friends of the Waterfront).
Gurigan Furan ee Internet-ka ah, waxaad:
Ka oggaan kartaa nakh-shadda 60% ee Dekedyarada (Pier) 58.
Isdiiwaangeli si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay
Si aad ula socoto mashruuca oo aad u oggaato tallaabooyinkeenna xiga ee gaarista, waxaan kugu dhiirrigelinaynaa in aad isku diiwaangeliso liiskeenna iimayl-ka.
Cunsurrada dekedyarada (pier) ee cusub
Cawska iyo goobta la fadhiisto ee sare loo qaadey ayaa loogu talagalay in lagu nasto oo lagu raaxeysto daawashada muuqaalada soo-jiidashada leh.
Goob daawasho oo bixinaysa aragtiyo furan, waaweyn ee Gacan-biyoodka iyo Buuraha Olombik.
Meesha loo dhisay quruxda biyaha ee Fitzgerald ayaa dib loo soo celin doonnaa waxaana lagu dari doonna dekedyarada (pier) ee cusub.
Fagaaraha iyo goobta dhacdooyinka ayaa loo adeegsan karaa waxqabadyo xilliyeedka sida bandhigyo faneedka, filimada bannaanka iyo dhacdooyinka kediska ku yimaada.
Goob lagu ciyaaro oo loogu talagalay carruurta iyo waalidiinta. Fikradda cunsurkan ayaa weli la diyaarinayaa.
Musqusha iyo goobta adeegga ee ku dheggan waddada biyo-xigeenka ayaa u adeegaya qoysaska iyo dadka soo booqda iyo in ay bixiyaan macluumaad ku saabsan barnaamijka hadda.
Fiidiyow: Guudmarka nakh-shadda ee 60%
La heli karo PDF [2.4 MB]
Muuqaallada ama sawirrada Dekedyarada (Pier) 58 ee cusub click for more details
Qaybaha nakh-shadda kor ku xusan ayaa kor u qaadaya goobaha loogu talagalay ciyaarta iyo nasashada.
Dekedyarada (Pier) 58 ayaa dib loo dhisi doonnaa iyada oo qaab saddex-geesle ah, oo leh meel u furan xeebta si loo si wanaajiyo deegaanka kalluunka Saalman. Guud ahaan cabbirka cagta laba jibbaaran ah ayaa qiyaastii ahaan doonno cabbir la mid ah kan dekedyarada hadda.
Aragtida kale ee cawska sare loo qaaday iyo dhabbaha taga dekedyarada (Pier) 57 ee ku yaalla cirifka biyaha iyada oo waddada dhinac marta biyahanna ay gadaal ku taallo.
Dekedyarada (pier) cusub waxaa ka mid ah caws iy goob la fadhiisto oo sare loo qaadey si loogu raaxeysto daawashada muuqaallada soo-jiidashada leh ee magaaalada iyo biyaha leh fadhiga dheeraadka ah ee u dhow dekedyarada (Pier) 57.
Dad fadhiya miisas iyo kuwa hoos taagan kooxda geedaha ah ee xoogaa harka ah leh.
Dusha sare ee aagga cawska, waxaad awoodi doontaa inaad ku raaxaysato Elliott iyo Garaangarta La Raaco ee Great Wheel.
Waxaan xirey qeybtii sahanka ee guriga furan ee internetka waxaana hada sii wadnaa horumarinta naqshadeynta anaga oo tixgelinayna jawaab celinta aan helnay. Inta hartay waxaan sii hayn doonnaa kheyraad ahaan illaa aan ka gaarno heerka ugu dambeeya ee naqshadeynta.
Waxaa jiray 1,174 oo qof gaar ah oo soo booqday gurigeenna furan ee internet-ka intii u dhaxeysay 13-ka Nofembar iyo 6-da Disembar, 2020. Waxaan 148 jawaabood ka helnay sahanka goob-ciyaareedda oo diiradda lagu saarayay nakh-shadaha iyo noocyada ciyaarta. Waxaa ku mahadsan dhammaan kuwii jawaab-celinta ka bixiyay! Xusuusin ahaan, goob-ciyaareeddan 5,000 cagood ee labajibbaaran ah (le’eg ku dhowaad cabbirka garoonka kubadda koleyga) ayaa ku yaalli doonta Deked-yarada (Pier) 58 inta u dhaxeysa Meesha Kalluunka iyo Xayawaan-badeedka Lagu Xannaaneeyo (Aquarium) iyo Miner’s Landing.
Waxa aynu maqalnay
Tiirarka Dekedyada (Pier Piles), Xariiqa-badda iyo Biyaha Washington ayaa waxay ahaayeen saddexda nakh-shadood ee horey loo soo bandhigay. Ma jirin nakh-shad si xad-dhaaf ah loo doorbiday, balse kuwo badan ayaa qaddariyay adeegsiga dhismayaal taagan si loo bixiyo isku-dheelirnaanta fidsanaanta dekedyarada iyo xoogaa shafaafiyaad ah oo lagu muujinayo aragga Gacan-biyood Elliott Bay marka laga soo eego waddada biyo-xigeenka si loo sii wanaajiyo bedqabka iyo kormeerka goobta lagu ciyaaro.
Badankiina waxaad jeclaateen qaybaha la fuulo iyo walxaha xariga
Waxaad kaloo qaddariseen walxaha bixin kara fursad waxbarasho iyo sidoo kale kala duwanaanta nooca ciyaarta
Waalidiinta iyo mas’uuliyiinta waxay doonayaan in ay si sahlan u awoodaan in ay muuqaal ahaan u baaraan guud ahaan garoon-ciyaareedka iyada oo la eegayo bedqabkiisa
Dhismayaasha waa in ay noqdaan kuwo ciyaartoodu ay daneynayaan da’aadda oo dhan, oo ay ku jiraan dadka waaweyn
Ku soo dhawoow in aad ka akhriso soo-koobidda oo dhan mareegtadeenna.
Bixi jawaabcelintaada ku saabsan nakh-shadda goob-ciyaareedda!
Haddii aadan arki karin sahankan hoose, waad qaadan kartaa boggan sahankan.
Waad ku mahadsan tahay ka mid noqoshada liistadayada boostada!
Isku diiwaangeli liiska iimaylka
Waxaa ilaaliya reCAPTCHA
Asturnaan - Shuruudo
Bartan dad kale la wadaag